Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1550
Par Taratra sur 22/02/2016 NS Malagasy, NS-Culture
CCEsca – Francis Turbo : nahazo ny anjarany avokoa ny tsirairay
Tonga maro ny mpijery ! Liana sy voasariky ny fampisehoana in-droa nisesy notontosain’i Francis Turbo ny faran’ny herinandro teo tetsy amin’ny CCEsca Antanimena. Seho nanehoany ankolaka na mivantana ny zava-misy eo amin’ny tontolon’ny finoana. Tehaka nirefodrefotra naneho fankasitrahana no nasetrin’ny mpijery tonga marobe nanatrika ny seho an-tsehatra « Andriamanitra ô ! Inona ary ity ? » niarahana tamin’i Francis Turbo […]
SZM : nifandray tetsy Mahamasina ireo skoto
Par Taratra sur 22/02/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Nomarihina omaly tetsy Antsahamanitra ny Andro eran-tany ho an’ny skotisma. Maherin’ny 2.500 ireo skoto zazalahy sy zazavavy ary ankizy avy eto Antananarivo sy ny manodidina tonga nanotrona ny fotoana. « Fifandraisana » ny lohahevitra novoizina nandritra ny fankalazana. Fifandraisana amin’ny namana, amin’ireo mpiara-miombon’antoka amin’ireo samy skoto ary indrindra amin’ny alalan’ny fivoaran’ny teknolojia moderina no nasongadina tamin’izany. Novoizina […]
Kitra – Barea de Madagascar : hanatevina ny ekipa teknika i Baovola sy Rabesandratana
Par Taratra sur 22/02/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Nohatevenina ny ekipa teknikan’ny Barea de Madagascar, mialoha ny hiatrehana ireo fihaonana iraisam-pirenena ambiny. Nantsoina hanampy ireo efa ao anatiny, Augustin Baovola sy Rabesandratana. Notapahin’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF), nandritra ny fivoriambe, nataony tany Fenoarivo Atsinanana, ny asabotsy lasa teo fa hampidirina ao anatin’ny ekipa teknikan’ny Barea de Madagascar, sokajy “senior”, Andriamiharinosy Augustin (Baovola) […]
Adala mirenireny : loza mitatao amin’ny fiarahamonina
Midaroka tampoka amin’ny hazo, mamelaka teha-maina, misintona ny sakafo eny an-tanàn-jaza, mandona mafy be, mitabataba, mandrora….. Ampahany amin’ny fihetsika ataon’ireo adala mirenireny eto Antananrivo ireo. Ao ireo torana mihitsy tratry ny felaka teha-maina mandrivorivo ataon’izy ireny. Ny sasany mandringo-bolo ka hifarimbonan’ny olona maromaro mihitsy vao afaka eo ny tanan’ilay adala. Maratra sy mitondra takaitra mihitsy […]
Hotanterahina ny 9 sy 10 marsa izao etsy amin’ny Carlton Anosy ny Salon des études Internationales amin’ity taona ity. Ho tazana amin’izany ireo oniversite efatra sangany ao Afrika Atsimo. Tanjona ny hahafantaran’ny tanora Malagasy ireo karazana oniversite manan ireo lalam-piofanana azo hanitarana ny fianarana. Hampahafantatra rahateo ireo karazana lalam-piofanan izay tsy mbola misy eto amintsika […]
Anketa – Toliara mitaky ny fameranana ny lakan-drano ny fokonolona
Nametraka sora-baventy sy naneho ny tsy fahafaliany manoloana ny biraon’ny fokontany ny mponina ao amin’ny fokontany Anketa, ny 20 febroary teo, noho ny fanampenan’ ny ramatoa iray ny lakan-drano manary rano mankany an-dranomasina. Fotodrafitrasa efa tamin’ny taona 1935 ity lakan-drano ity, mamakivaky ny tanànan’Anketa. Fokontany efatra mahazo tombontsoa avy amin’izany : Anataravay, Anketa Voalohany, Anketa […]
Par Taratra sur 22/02/2016 Divers, NS Malagasy
Natao ny 13 febroary teo ny fivoriamben’ny Ivontoerana fitantanana nahazo alalana, na Centre de gestion agrée (CGA) eto Antsirabe. Nisy fitomboana kely (82) ny mpikambana satria lasa 182 ny taona 2015 raha 154 ny taona 2014. Marihina fa nahatratra 50 ireo mpikambana vaovao nanatevina ao anivon’ny CGA, ny taona 2014. Nilaza ny tale mpanatanteraka ny […]
Beach Soccer : nomena “ordre du merite sportif” ny mpilalaon’ny Barea
Notoloran’ny fitondram-panjakana, «ordre du merite sportif », ireo mpilalao nandrafitra ny Barea de Madagascar, nahazo ny Can 2015, eo amin’ny taranja beach soccer. Ny minisitry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra, Rakotomamonjy Neypatraiky, nisolo tena ny tomponandraikitra misahana izany, no nanolotra izany, ho an’ireo mpilalao. “Chevalier de l’ordre nationale“, kosa ny an’ireo mpanazatra 3 mirahalahy dia i […]
Seha-pihariana iray : homen-danja ny fiompiana alika Berger Allemand Lof
Par Taratra sur 22/02/2016 Economie, NS Malagasy
Nampahafantatra ny fijoroany, ny faran’ny herinandro teo, tao amin’ny oniversite E-Media eny Tsiadana, ny fikambanana mpiompy alika AMBA (Association malgache de Berger Allemand) tarihin’ny filohany, Rakotobe Tony. Mpiompy karazana alika Berger Allemand (BA) ireo ao anatin’ny fikambanana, nefa koa tsy misakana ny hafa izay te hiditra. Any Eoropa, na amin’ny firenena sasany afrikanina, efa lasa […]
Federasiona malagasin’ny baolina kitra : efa nampoizina ny “Quitus 100%” avy amin’ireo ligy
Tsy nahataitra ny mpanara-baovao intsony fa efa nampoizina ny nanomezan’ireo ligim-paritra 22 fitokisana ny mpitantana eo anivon’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF). Nahazo “quitus 100%” indray mantsy i Ahmad sy ny ekipany. Nandritra ny fivoriamben’ny federasiona natao tany Fenoarivo Antsinanana, ny asabotsy lasa teo, no nanaovana izany. Na nisy aza ireo filohana ligy vitsivitsy tsy […]
Lomano – Mada Jeunes 2016 : nahavita « meilleures performances » i Mamihaja Nathan sy Idealy
Nahitana « meilleures performances » roa ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara taranja lomano, sokajy tanora. Ny iray, tamin’ny alalan’i Mamihaja ary ny iray tamin’ny alalan’Idealy. Niady ny fihaonana. Tontosa tetsy amin’ny dobo filomanosana Olympika, etsy amin’ny ANS Ampefiloha, ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara, taranja lomano, rehefa nizotra nandritra ny hateloana (19 – 21 febroary). Nahavita « meilleures performances » […]
Basikety – Coupe du Président : ekipa 12 indray hikatroka amin’ny Play-off
Ekipa 12. Ireo no indray hikatroka amin’ny dingana “Play-off” amin’ny fiadiana ny “Coupe du Président”, taranja basikety, andiany faharoa. Fifaninanana hotanterahina, ny 27 febroary – 6 marsa izao, any Mahajanga, ao amin’ny kianja mitafo vaovao. Araka ny voalahatra sy araka ny lalàn’ny fifaninanana, valo amin’ireo ekipa 12 hiatrika ny “Play-off”, ireo ekipa roa voalohany tafavoaka […]
Kempo – Fiofanana : nanomanana sahady ireo hetsika nasionaly
Niatrika fiofanana, nandritra ny roa andro, ny faran’ny herinandro teo tetsy amin’ny dojo “sous-gradin”, ireo mpitsara sy mpanazatra ary mpikatroka eo amin’ny kempo sy MMA (Mixed Martial Art). Fiofanana nokarakarain’ny fikambanana Perfect Fighting Commission na PFC notarihin’ny filohany, Rakotonindriana Parfait. Nizara telo niavaka tsara ny fampianarana tamin’izany. Ny tapany voalohany, natokana fotsiny ho an’ireo mpitsara […]
Opta – Ramarosaona Fara Bernard – “Ady amin’ny kolikoly: olana ny fitondrana sy ny fitsarana”
Par Taratra sur 22/02/2016 NS Malagasy, NS-Politique
“Olana amin’izao ady amin’ny kolikoly izao ny fitondrana sy ny fitsarana. Nefa avy any aminy ny zava-drehetra… Efa manao antso fanairana foana izahay firaisamonina sivily, ary tsy mitsahatra amin’izany”, hoy ny avy amin’ny firaisamonina sivily Olom-pirenena tompon’andraikitra (Opta), Ramarosaona Fara Pierre Bernard, teny amin’ny Cite, Ambatonakanga, ny faran’ny herinandro teo. Nijoro tamin’ny 2006 ny Opta, […]
Badminton : nanokatra ny taom-pilalaovana ny FMBad
Notontosain’ny federasiona malagasin’ny badminton na FMBad tetsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena, efitrano kely, Mahamasina, ny fifaninanana fanokafana ny taom-pilalaovana 2016 eo amin’ny taranja badminton. Raha ny fanazavana, fifaninanana natao sahady hanomanana ireo ankizy hiatrika ireo fifaninanana federaly ho amin’ity taona ity izany. Teo ihany koa ny fampandraisana anjara amina fifaninanana ireo ankizy, mpianatra teny anivon’ireo sekoly […]
Filoha Rajaonarimampianina : « Efa manomboka manga ny lanitra fa tsy maitso intsony… »
Nitsidika ny orinasam-panjakana Fanjarian’ala Ambatondrazaka Moramanga (Fanalamanga) ao Tsirinala Moramanga ny filoha Rajaonarimampianina, ny faran’ny herinandro teo. Ankoatra ny resaka toekarena, nanaovany sarin-teny ny resaka politika. « Efa manomboka manga ny lanitra tato anatin’ny herintaona fa tsy maitso intsony », hoy izy. Na tsy nivantana aza, anisan’ny tiany hambara ny fahazoan’ny antokony, HVM ny maro anisa […]
Tanamakoa Toamasina : polisy nandrahona olona tamin’ny basy tao anaty karaoke
Io indray ! Nandrahona olona tamin’ny basy tao anaty karaoke iray ao Tanamakoa, ny herinandro teo ny polisy roa lahy samy miasa ao Tanambao Bazarikely Toamasina. Araka ny fanazavana voaray, avy niasa nandamina ny fifamoivoizana izy roa lahy ka lasa namonjy karaoke izay samy mbola nitondra basy. Nony tafiditra tao an-trano izy roa lahy dia nikaomandy […]
Nijoro ny Achropol hiaro ny mpanao gazety
Hifampitaiza sy hifanakalo traikefa ary hanamafy ny firaisankina sy hiaro ny asa fanaovan-gazety, indrindra manoloana ny olana ara-politika ka hanenjehana ny mpanao gazety. Antom-pijoroan’ny fikambanan’ireo mpanao gazety mikirakira ny vaovao politika (Achropol) ireo. Tontosa ny asabotsy teo teny Tsiadana ny fifidianana ny birao vaovao hitantanana ny fikambanana mandritra ny telo taona. Voafidy ho filohan’ny Achropol […]
Holafitry ny mpisolovava : “Mbola mafimafy ny kolikoly eny amin’ny fitsarana”
Par Taratra sur 22/02/2016 Faits Divers
“Irahantsika mahafantatra ny filazana sy fanazavan’ny rafitra sy tomponandraikitra samihafa miasa eto amintsika: mbola mafimafy ihany ny resaka kolikoly amin’ny fitsarana eto Madagasikara. Milaza izahay fa samy tomponandraikitra amin’io avokoa.” Io no nambaran’ny filohan’ny holafitry ny mpisolovava, Raharison Hubert, tamin’ny andron’ny mpisolovava teny Anosy, afakomaly. Nifantohana tamin’izany ny hoe: “Ny andraikitry ny mpisolovava amin’ny fampanjakana […]
Noraisim-potsiny! Voasambotry ny mpitandro filaminana tao Manakarabe, ny 19 febroary 2016 teo ireo telo lahy nisandoka ho Dir Cab-n’ny Antenimieram-pirenena. Nikasa haka vola mitentina 40 tapitrisa Ar tamin’olona iray tany an-toerana izy ireo… Nokasain’ireto mpisoloky ireto hakana lelavola mitentina 40 tapitrisa Ar ny fianakaviana manam-boninahitra mipetraka ao Manakarabe, araka ny fanazavan’ny loharanom-baovao iray any […]
Iantonana-Antsirabe : tratra ireo olona nandoro ny tranon’ny kaominina
Voasambotry ny Emmo/Reg, ny asabotsy teo ireo olona miisa fito voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ny fandorana ny biraon’ny kaominina Iantonana Betafo. Ny 4 febroary 2016 lasa teo nitrangan’ity fandorana ny tranon’ny kaominina ity. Tsy fantatra marina hatreto izay antony nahatonga ireo olona handoro ny biraon’ny kaominina fa iray amin’ireo voarohirohy ao anatin’ity raharaha ity ny ben’ny […]
« Précédent 1 … 1 548 1 549 1 550 1 551 1 552 … 1 596 Suivant »